Nagu saabsan - Dongguan Qiaofeng Qalabka Qalabka Caaga ah Co., Ltd.
DongguanQiaofeng Qalabka Qalabka Caaga Qalabka Co., Ltd, oo la aasaasay 2008.Since tan iyo markii la aasaasay, shirkadu waxay diiradda saartay alaabta waaweyn, nalalka, elektaroonigga, alaabada carruurtu ku ciyaarto iyo warshadaha kale si ay u bixiyaan alaabada caagga ah iyo marinnada.
Waxyaabahayagu waxay diiradda saaraan qalabka caagga ah, qalabka dhismaha, qalabka guryaha Pedarka LedDriver Enclosureaccessories, qalabka lidka ku ah caarada, barroosinka qalabka guryaha, cagaha hagaajin kara, ilaaliyaha geeska caagga ah, Xakamaynta fog, Lampshade, keeydiyaha, qaybta, Qalabka / Nalalka / Xiriirka elektarooniga ah iyo dhejinta, iwm. waxaan u adeegnaa macaamiisha adduunka oo idil. Shirkadda hasmany sare mashiinka wax taaj oo kale duray iyo qalabka wax soo saarka caaryada caag ah, kaas oo ku siin kara adeegyo isku dhafan of design caaryada iyo wax soo saarka, wax taaj oo kale duray, processing iyo shirkii.Wealso aqbalo OEM / ODEM si iyo xirmo. waxaan ku siin doonaa qiimaha iyo adeegga ugu fiican.
Shirkaddu waxay u ololeysaa ruuxa ganacsiga "xirfad, wax ku ool ah, hufan oo hal-abuurnimo leh", wuxuu leeyahay farsamo wanaagsan oo gudaha ah, jawi shaqo oo fiican iyo habab dhiirrigelin wanaagsan, wuxuuna soo jiitaa koox tayo sare leh, heer sare ah oo karti leh. Shirkaddayada waxay dejisay jaangooyooyin iyo nidaamyada isku xirka adeega ee gudaha iyo dibada. Marka loo eego mabaadi'da "Dad-ku-saleysan, Badbaadinta Tayada, Horumarinta Dhibcaha", shirkadeena waxay sameysaa horumar joogto ah waxayna siisaa alaabada iyo adeegyada ugufiican ee aad ubaahan karto waqti kasta.Our shirkadeena waxay si kal iyo laab ah u soo dhaweyneysaa macaamiisha gudaha iyo shisheeyahaba hanuuninta iyo gorgortanka mustaqbalka ifaya!